दूध चुहिने : अविवाहित युवतीमा समस्या के हो ? के कारणले हुन्छ ? – Saurahaonline.com
दूध चुहिने : अविवाहित युवतीमा समस्या के हो ? के कारणले हुन्छ ?
प्रश्न : म २४ वर्षको छु। अविवाहित हुँ। तर, मेरो स्तनबाट दूध चुहिने समस्या देखिएको छ? निकै तनावमा छु। के हो स्तनबाट दूध चुहिने समस्या? के कारणले हुन्छ र उपचार के हो ? – एस